Nametra-pialana ny mpiara-manorina Neuralink. Ahoana ny amin'ny fifandraisana amin'ny masinina? - SmartMe
Mpanorina ny Neuralink - Max Hodak dia nanambara fa efa nahavita fiaraha-miasa tamin'ny orinasa izy. Tsy mbola fantatra ny antony nialan'i Hodak.
Niala tamin'ny orinasa ny mpiara-manorina an'i Neuralink
Elon Musk dia nanome toky tamin'ny fotoana maro fa ny chip namboarin'ny orinasany, izay niara-niasa taminy ihany koa, ankoatry ny hafa Hodak dia ahafahan'ny olona manana tadin'ny hazon-damosina mandeha mandeha indray. Izy io koa dia tokony hamerina amin'ny laoniny ny mason'ireo olona manana hozatra optika vaky. Nandritra ny resadresaka nifanaovana dia nilaza i Musk fa afaka 10 taona, noho ireo interface ireo, afaka miala amin'ny resaka isika.
Ny fifandraisana dia hitranga tsy misy tariby eo anelanelan'ny chips. Tsy amin'ny alàlan'ny fampitana teny fotsiny, fa ny sary iray manontolo, izay hanatsara ny fifandraisana eo amin'ny samy olona.
Ny fialan'i Hodak dia azo antoka fa hetsika tsy nampoizina. Na izany aza, nandà ny hanome fanazavana momba ny antsipiriany sy ny anton'ny fialany ny filoha teo aloha.
Ny maso bionika dia tsy nofinofy, manomboka izao dia zava-misy - Gennaris
maso bionika, genneris, neuralink
Hanova antsika ny teknolojia. Ary tsy miresaka momba ny lafiny ara-panahy eto aho, fa momba ny fisehoantsika ivelany. Any Aostralia, 10 taona mahery taty aoriana, vita ny asa amin'ny maso bionika. Hanjavona tsy ho ela ve ny fahajambana? Rehefa fantatro ...
Elon Musk dia manolotra ny V2 - fahombiazana iray amin'ny Neuralink
29 Aogositra 2020
neuralink, tsaina, V2
Niandry ela be izahay androany. I Elon dia hampiseho fahatapahana iray hafa any Neuralink. Inona no natolotra androany hariva? Moa ve isika akaiky kokoa ny mifangaro amin'ny solosaina noho ny famolavolana vaovao nefa mampiady hevitra? Tokony hanaiky aho fa ny ora ...
Neuralink avy amin'i Elon Musk - hanomboka hampiditra Chips amin'ny faran'ity taona ity isika
Neuralink dia iray amin'ireo mpifaninana kokoa mampiady hevitra, fa mandritra izany fotoana izany dia manentana ny fisainan'ny tetikasa. Ny fangalarana tsipika ho an'ny olona izay hanampy ny fiasa vaovao ho antsika dia toa ny fehezin'ny sarimihetsika Sci-Fi, fa miaraka amin'i Elon dia mety hitranga amin'ny herintaona izany. Raha miteny ...